Tagged: Skin & Body
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျဒီနေ့ ကျွန်တော် အရေပြား လေးဘက်နာ အကြောင်း ပြောပြပါ့မယ်။ SLE ဆိုတာဘာလဲ…? SLE ဆိုတာက အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ကိုဆိုလိုပြီး အပြည့်အစုံက(Systemic Lupus Erythematosus)ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြား လေးဘက်နာ ရောဂါ ဟာ(Lupus)လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဒီပိုးဟာ နာတာရှည် ဖူးရောင်တတ်တဲ့ပိုး(Lupus isachronic inflammatory disease)ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ကူးစက် ရောဂါ...
နေပူပူကြောင့် ချိုင်းချွေးပိုထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေလား
ပူလွန်းတဲ့ နွေရာသီမှာ ပုံမှန်ထက် ချွေးပိုထွက်ကြတာက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ် နေရာအနှံ့အပြားက ချွေးထွက်တတ်ပြီး ချိုင်းချွေးကတော့ မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ညစ်ရမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ချိုင်းချွေး အများကြီး မထွက်စေဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင်…. ချိုင်းချွေးများများ မထွက်စေဖို့ အတွက် ရေများများ သောက်ပေးဖို့ လိုအပ်သလို ချိုင်းမှာရှိတဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့...